Maqaal xiiso leh : “Ri’deydu ha ii Codeyso” (W/Q: Dulyar)! | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Maqaal xiiso leh : “Ri’deydu ha ii Codeyso” (W/Q: Dulyar)!
Maqaal xiiso leh : “Ri’deydu ha ii Codeyso” (W/Q: Dulyar)!
Nov 05, 2016ARRIMAHA BULSHADA, HORUMARKA DALKA, WARAR
Soomaaliya waxaa dhawaan la filayaa ineey ka dhacaan Doorashooyin Dadban oo dalka loogu dhisayo Dowlad Hogaamisa 4-ta Sano ee soo socota. Markase la raad raaco macnaha DOORASHO DADBAN , .waxaa kuu soo baxaya waa inaan sinaba loo filan karin iney qabsoonto Doorasho Cadaalad iyo Yaa mudan ku dhacda oo ay Odayaasha ama Xildhibaanadu ku soo xulaan hogaanka Dalka.
Si taa la mid ah Siyaasadda Soomaaliya waa mid u fudud inuu soo galo qof kasta oo dhaqaale u heysta una badheedhi kara qamaarka dalka ka socda,waxaana muuqda waqtigaan ineey ganacsatadii awal maalgalin jiray Siyaasiyiinta qaraabadooda ah ay ku soo biireen loolanka socda, maadaama ay arkeen shaqsiyaadkii ay maal galiyeen 4 Sano ka hor oo hada Sheerer waaweyn ku leh ganacsigooda. magaaladana ka dhistay daaro waaweyn,balse waxa ay dadka ka faalooda Siyaasadu qabaan mar hadii ay Ganacsatada iyo Siyaasaddu isku soo gacan banaanaadaan in ay soo dagdagi doonto Geerida shacabka danyar taahi. .
Previous PostDaawo Sawiro> Faahfaahin ka soo baxeysa khasaaraha weerarkii caawa ka dhacay Muqdisho & Al-Shabaab oo sheegatay!! Next PostWeriyeyaal lagu eedeeyey iney taageeraan Fatxullah Gulen oo xabsiga la dhigay maanta Daawo Sawiro!!